मोजेक सुविधाहरूको साथ अब कुनै अन्धा स्थानहरू छैनन् - Geofumadas
सेप्टेम्बर, 2019 जियोस्पाटियल - जीआईएस, नवाचारै
निस्सन्देह, सेटेलाइट छविहरूसँग काम गर्दा उत्तम केस भनेको सेन्टिनेल-एक्सएनयूएमएक्स वा ल्यान्डसेट-एक्सएनयूएमएक्सको प्रयोगका लागि सबैभन्दा उपयुक्त छविहरू फेला पार्नु हो, जुन तपाईंको क्षेत्रको विश्वसनीयता (AOI) लाई कभर गर्दछ; त्यसकारण, यसले छिटो सहि र बहुमूल्य डाटा प्रोसेसिंगको परिणाम स्वरूप प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।
कहिलेकाँही, तपाइँको AOI को केही खण्डहरू, विशेष रूपमा ठूला AOI हरू धेरै दृश्यहरू कभर गर्दछ, साथै AOI हरू दृश्यको छेउमा वा छेउमा अवस्थित छन्, वर्तमान क्षेत्रको सीमानाहरू भन्दा टाढा रहन सक्छ। कम्पालेसन छविहरूमा सम्मिलित हुने यी समस्याहरूले आंशिक विश्लेषण र बहुमूल्य जानकारी गुमाउन सक्छ।
मोशाको छविहरूको मिलनको समस्याहरूको समाधान गर्न जन्म भएको थियो
मोजेक स्क्र्याचबाट प्रयोग गर्न सजिलो समारोहको रूपमा डिजाइन गरिएको थियो जसले तपाईंलाई सेन्सरबाट समूहीकृत दृश्यहरू मिलाउन, मर्ज गर्न र दृश्यको लागि, विशिष्ट AOI र आवश्यक डाटा समय फ्रेमका लागि अनुमति दिन्छ।
आवश्यक मिति को लागी उपलब्ध सबै दृश्यहरु मिलाईएको छ र AOI 100% मा कभर गरिएको छ।
समाधान यति सरल र प्रभावी छ कि यो अविश्वसनीय आश्चर्यजनक छ कि यो पहिले गरिएको छैन।
GIS उपकरणहरूमा मोजेक आधारभूतहरू उपलब्ध छन्
त्यहाँ छन् विभिन्न दृष्टिकोण तपाईंको आफ्नै मोजेक सिर्जना गर्न, तपाईं चाँडै आफ्नो आवश्यकताको लागि सबैभन्दा उपयुक्त छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
मोजेक विश्वव्यापी कभरेज
मोजेक प्रति दिन सबै उपग्रह पासबाट मिल्दछ।
मोजेक कडा रूपमा स्थापित ब्याेष्ट (AOI) भित्र सिर्जना गरिएको छ।
ल्यान्डभ्युवरमा मोजेकले कसरी काम गर्छ?
LandViewer (LV)बदले, दृष्टिकोणको संयोजन प्रदान गर्दछ, त्यो हो कि, प्रयोगकर्ताले AOI कोर्दछ। त्यसोभए प्रणालीले AOI लाई बक्समा लपेट्छ विशिष्ट ज्यामिति AOI वरपर रेखांकित गर्दछ, जसको आधारमा छविहरू रेन्डर हुनेछन्। उदाहरण को लागी, एक AOI गोलाकार छ कि मामला मा, मोज़ेक बाह्यरेखा वर्ग भित्र प्रतिनिधित्व हुनेछ।
AOI स्थापना भएको मार्गमा निर्भर गर्दै, प्रयोगकर्ताले निम्न परिणामहरू मध्ये एक प्राप्त गर्दछ:
यदि तपाईंले नक्शामा मार्कर छोड्नुभयो भने, सफ्टवेयरले व्यक्तिगत दृश्यहरूको सूची उत्पन्न गर्दछ, तपाईंले पहिले गरे जस्तो।
यदि तपाईं दुई वा अधिक दृश्यको किनारमा अवस्थित ठूलो AOI वा AOI कोर्नुभयो भने, मोज़ेक खोजी परिणामहरूमा पूर्ण हुनेछ।
मोजिक सुरु गर्न मात्र सर्त AOI हो
एकचोटि तपाईले AOI लाई धेरै दृश्यहरू कभर गरेर कोरनुभयो, क्लाउडनेस फिल्टर गर्नुभयो र सूर्यको इच्छित कोण सेट गर्नुभयो, प्रणालीले स्वचालित रूपमा सेट गरिएको प्यारामिटरहरू अनुसार पूर्वावलोकनको साथ मोजेक खोजी परिणामहरू प्रदर्शन गर्दछ। मोजेकमा दृश्यहरूको संख्या पूर्वावलोकन कार्डहरूमा तोकिएको छ।
मोजेक कुञ्जी क्षमताहरू
हामी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बिन्दुमा पुगेका छौं। हामी अरू के गर्न सक्छौं? एकचोटि हामीले नक्शामा मोजेक देख्यौं, हामी निम्न विकल्पहरूको साथ जारी राख्न सक्छौं:
अनुक्रमणिका र ब्यान्डको संयोजनहरू, दुवै पूर्वनिर्धारित र अनुकूलन लागू गर्नुहोस्।
चमक र कन्ट्रास्ट स्ट्रेच सेट गर्नुहोस्।
ब्राउजर विश्लेषण (चाँडै आउँदैछ)
मोनिटर गर्नुहोस् र मापन गर्नुहोस् कि कसरी एक विशेष क्षेत्रको विशेषताहरू परिवर्तन डिटेक्शन फंक्शनको साथ दुई वा अधिक समयको बीचमा परिवर्तन भयो।
कार्यको उपयोग गरेर अनुक्रमणिका मान दायरा अनुसार प्रभावकारी जोन व्यवस्थापन गर्दछ क्लस्टरिंग.
तपाईको रूचि (AOI) को लागि लामो समय अवधिमा समय श्रृंखला विकल्पहरूको साथ वनस्पति वृद्धिको गतिशीलता प्रमाणित गर्नुहोस्।
आकर्षक GIF वा भिडियो कथाहरू सिर्जना गर्नुहोस् र एनिमेसनको साथ अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग तपाईंको डाटा साझेदारी गर्नुहोस् समय-चिसो.
LandViewer मा उपलब्ध विकल्पहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
तीन प्रकारका डाउनलोडहरू मोजेकमा लागू गर्न सकिन्छ, यी दृश्य, विश्लेषक वा अनुक्रमणिका हुन्, प्रयोगकर्ताका आवश्यकताहरूमा निर्भर छन्।
नोट: प्रयोगकर्ताले डाउनलोडको प्रकार चयन गर्दछ «मोजेक» वा k थोकमा खण्डहरू »। यी दुई विकल्पहरूको बिचको भिन्नता अन्तिम डाटामा पर्दछ जुन प्रयोगकर्तालाई प्रस्तुत गरिनेछ: प्रणालीले "मोजेक" डाउनलोड विकल्पको साथ मर्ज गरिएका दृश्यहरू डाउनलोड गर्दछ; प्रणालीले दृश्यहरूको टुक्रालाई सूचीको रूपमा डाउनलोड गर्दछ यदि प्यारामिटर «मास खंडहरू। चयन गरिएको छ।
दृश्य: यदि तपाईंले प्रकार चयन गर्नुभयो भने दृश्य, नतिजा डेटा JPEG, KMZ र GeoTIFF फाईल ढाँचामा डेलिभर हुनेछ जसमा मर्ज गरिएका दृश्यहरू छन् (उदाहरण को लागी, सबै दृश्यहरू जुन AOI मा झर्छन् र पार गर्दैनन्)।
विश्लेषण: सँग डाउनलोडको नतीजा विश्लेषण चयन गरिएको मेटाडेटा बिना मर्ज गरिएको ब्यान्डहरूको फाईल हुनेछ (उदाहरणका लागि [जियोटिफएक्सएएनएमएक्स: B1, जियोटिफएक्सएनएमएक्स: B02, जियोटिफएक्सएनएमएक्स: B2, जियोटीफएक्सएनुक्स: B03।])।
को प्रकारको साथ अनुक्रमणिका, मोज़ेकको लागि नतिजा डेटा TIFF फाईलको रूपमा प्रस्तुत हुनेछ
अनुक्रमणिका: "क्रप द्वारा डाउनलोड गर्नुहोस्" विकल्पको नोट लिनुहोस्। मोजेकको ट्रिमिंग प्रयोगकर्ताको प्यारामिटरको हिसाबले गरिन्छ, त्यो हो, प्रयोगकर्ताले निर्दिष्ट गरेको बक्स ज्यामिति। क्लिपिंग प्यारामिटरहरू सेट नगरिएका अवस्थाहरूमा, सबै दृश्यहरू पूर्ण डाउनलोड हुन्छन्।
केस केस १: निर्माण विकास निगरानी, ​​दुबई प्रयोग गर्नुहोस्।
उद्देश्य: रूचि (AOI) को एक विशाल क्षेत्र को निर्माण को विकास मा प्रगति पत्ता लगाउनुहोस्
लक्षित दर्शक: निर्माण उद्योगमा सबै कम्पनीहरू
समस्या: प्रयोगकर्ताले रूचीको क्षेत्र सेट अप वा लोड गर्‍यो र 19 बाट जुलाई 2019 मा लिइएको छवि चयन गर्‍यो। स्क्रिनशटले स्पष्ट रूपमा देखाउँदछ कि व्यक्तिगत तस्बिरले चासोको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्दैन।
समाधान: यस अवस्थामा, प्रयोगकर्ताले दृश्य संख्याको उचित संख्याको साथ पूर्वावलोकन कार्ड चयन गर्नुपर्नेछ जुन आफ्नो AOI लाई कभर गर्दछ, खोज परिणामहरूको उत्पन्न गर्दछ र "मोजेक" तत्वमा क्लिक गर्नुहोस्।
निष्कर्ष: मोजेकले ठूला क्षेत्रहरूको अनुगमन गर्न अनुमति दिन्छ।
पहिले, ठूला क्षेत्रहरूको अनुगमनका लागि प्रयोगकर्ताले दृश्यहरू बीच स्विच गर्न र म्यानुअल रूपमा मर्ज गर्न आवश्यक पर्दछ। यो प्रक्रिया एकदम असुविधाजनक थियो र लामो समय लिएको थियो। अब देखि, सबै छिटो र सजिलो छ: तपाइँको AOI कन्फिगर गर्नुहोस् र LandViewer स्वचालित रूप बाट तपाइँको लागि बाँकी व्यवस्थापन गर्दछ।
2 उपयोग केस: क्यालिफोर्निया आगो निगरानी
उद्देश्य: क्षतिग्रस्त क्षेत्र परिभाषित गर्नुहोस्, त्यो हो, एनबीआर अनुक्रमणिका लागू गर्नुहोस् र मोजेक दृश्य डाउनलोड गर्नुहोस्।
विवरण: 2018 को नोभेम्बरमा, क्यालिफोर्नियामा ठूलो आगलागी भयो र कम्तिमा 85 व्यक्तिहरूको ज्यान गयो। लगभग चौध हजार (14,000) घरहरू नष्ट भए, र करीव एक सय पन्ध्र हजार (115,000) हेक्टेयर वन हरायो। स्थानीय अधिकारीहरूले यसलाई राज्यको इतिहासमा सब भन्दा ठूलो आगो भने। यो टिप्पणी आश्चर्यजनक होइन, यस तथ्यको बाबजुद कि गत बर्षमा एक सय हजार भन्दा बढी (100,000) हेक्टर जमिन हराइसकेको थियो।
क्यालिफोर्नियाका स्थानीय अधिकारीहरूले आगो निभाउन करीव करीव thousand हजार दमकल कर्मीहरू खटाए, जसले केवल आगोको सामना गर्न सकेनन, जुन केही क्षेत्रहरूमा प्रति घण्टा 130 किलोमिटरको गतिमा फैलियो।
समाधान: प्रभावित क्षेत्रहरुमा हुने क्षतिको निर्धारण गर्न, लागू गरिएको एनबीआर अनुक्रमणिकाको साथ प्रकोप प्रकोप र पछिको तुलना गर्न आवश्यक छ।
1 चरण: तपाईंको रूचिको क्षेत्रबाट AOI कोर्नुहोस् वा लोड गर्नुहोस् र एक प्रकोप मिति सेट गर्नुहोस्।
1 प्रकोप भन्दा पहिले छवि: ब्याज को क्षेत्र को कुल कवरेज को लागी एक मोज़ेक प्रतिनिधित्व को परिणाम (AOI)।
2 चरण: मोजेकको साथ पूर्वावलोकन कार्ड चयन गर्नुहोस्, "ब्यान्ड संयोजनहरू" ट्याबमा जानुहोस्, त्यसपछि NDR अनुक्रमणिका चयन गर्नुहोस्। यस चरणमा, प्रणालीले गणना गरिएको अनुक्रमणिका मानहरू प्रदर्शन गर्दछ, सुन्तला-हरियोमा हाइलाइट गरियो। अर्को, «डाउनलोड» ट्याबको साथ जारी राख्नुहोस् र क्षेत्र छनौट गर्नुहोस् जहाँ तपाईंलाई सम्बन्धित अनुरोध गरिएको डाटा आवश्यक छ।
2 छवि: एनबीआर अनुक्रमणिकाको दृश्यले आगोको अवस्था देखाउँदछ।
3 चरण: रुचि (उही) का समान क्षेत्र को लागी प्रकोप पछि छान्नुहोस्।
3 प्रकोप भन्दा पहिले छवि: ब्याजको सम्पूर्ण क्षेत्र (AOI) का लागि मोज़ेक प्रतिनिधित्व गर्ने परिणाम।
4 चरण: NX अनुक्रमणिकाको प्रयोग गरेर मोजेक डाउनलोड परिणामहरू प्राप्त गर्नुहोस्, चरण3मा फेला परेका समान एल्गोरिदमहरूको अनुसरण गरेर।
4 परिणाम छवि: प्रकोपपछिको दृश्यले प्रभावित क्षेत्र देखाउँदछ र क्षतिको दृश्य कल्पना गर्दछ।
परिणाम: प्रभावित क्षेत्रहरू रातोमा देखाइन्छ। छविहरू तुलनाको अघि र पछाडि एनबीआर अनुक्रमणिका मानहरूसँग तुलना गरेर हामी क्षतिको आकलन गर्न सक्छौं।
मोज़ेकले तपाईंको लागि कार्य गर्न दिनुहोस्
अन्तमा, मोसाइकले एउटा छवि प्राप्त गर्न एक अद्वितीय समाधान प्रस्ताव गर्दछ जुन तपाईको रूचिको क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा ढाक्छ, आकारको परवाह नगरी सबै भन्दा राम्रो परिणामको साथ। मोजेकले एक स्थापित स्थान, उडानमा पूर्वनिर्धारित वा अनुकूलित अनुक्रमणिका, र पछि विश्लेषणको लागि दृश्यहरू डाउनलोड गर्ने सम्भावनाको लागि सेन्सरबाट दैनिक उपग्रह छविहरूको संयोजनको अनुमति दिन्छ। म्यानुअल प्रिसेलेक्शन, छवि परिवर्तन, खाली ठाउँ र मैन्युअल छवि सामेल गर्न सदाको लागि बिदाइ गर्नुहोस्।
मोजेकमा विस्तृत जानकारीको लागि, ल्यान्डभ्युभर प्रयोगकर्ता मार्गनिर्देशन हेर्नुहोस् वा हामीलाई support@eos.com मा ईमेल गर्नुहोस्
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो STAAD - लागत प्रभावी डिजाइन प्याकेज बनाउने संरचनात्मक तनावको सामना गर्न अनुकूलित - पश्चिम भारत
अर्को पोस्ट जियो-ईन्जिनियरि Con अवधारणालाई पुन: परिभाषित गर्दैअर्को »
एकलाई जवाफ दिनुहोस् "मोजाइक सुविधाहरूको साथ कुनै अन्धा स्थानहरू छैनन्"
जीआईएस इन्फोमेडिया भन्छिन्:
वाह, मलाई त्यो कहिले पनि थाहा थिएन। धेरै धेरै धन्यवाद